Azonao atao ve ny manana orinasa rongony miorina mitsangana any New Mexico? -
Taorinan'ny fandaniana lalàna vaovao momba ny rongony any New Mexico, dia nisy fikorontanana be. Noho izany, very hevitra ny olona momba ny karazana fahazoan-dàlana takian'izy ireo. Sarotra kokoa ny mahazo ny zon'ny rano. Ireo tompona orinasa vaovao dia mila mamantatra ny karazany sy ny vidin'ny asany. Ao anatin'izany fisavoritahana rehetra izany, manontany tena ny mpangataka raha hanokatra orinasa rongony miharo volo ny lalànan'ny fanjakan'i New Mexico.
Orinasa rongony mifangaro vertikal - inona izany?
Ny sasany amin'ireo mpamaky antsika dia mety tsy hahafantatra ilay teny hoe rongony miharo volo. Any amin'ny fanjakana toa an'i Oklahoma dia mila mandinika tsara momba ny asanao ianao ary amin'ny orinasam-pivarotana rongony miharo volo miharo volo, mifanohitra amin'ny orinasa an'arivony ianao. Raha tsorina, ny fampidirana mitsangana dia rehefa misy orinasa manana ny dingana rehetra ao amin'ny rojom-panomezana azy. Ohatra, ny orinasan-telefaona finday toy ny paoma dia manamboatra ny faritra rehetra amin'ny fitaovany. Izy ireo koa dia manana ny ozinina famokarana rehetra anaovana ny vokariny.
Ao amin'ny orinasa rongony, ny fampidirana mitsangana dia midika fa ny mpamokatra dia manana ny fambolena, ny fambolena ary ny laboratoara mba hanandramana santionany.
Dingana fampidirana vertika ganja
Dingana fitomboana: Ny rongony dia ambolena mandra-pahatongan'ny fambolena.
Dingana fitrandrahana:Ny rongony dia ampandalovina amin'ny dingana fitrandrahana. Ny cannabinoids dia esorina amin'ny famokarana be.
Famokarana:Ny rongony dia avadika ho vokatra ary fonosina.
Sehatra fivarotana: Vonona hamidy eny an-tsena ny vokatra.
Fanjakana maro no nanara-dalàna ny famokarana marijuana. Ankoatr'izay, ny maodelim-pandraharahana rongony mihombo miorim-paka dia miovaova arakaraka ny fanjakana. Any New Mexico, lany ny lalàna tato ho ato, ka tsy maintsy jerentsika ny fomba fampiharana azy eto.
Ny maodelin'ny orinasa any New Mexico
Ao amin'ny maodelim-pandraharahana ara-pitsaboana any New Mexico, ny fidirana amin'ny tendrony no hany safidy. Ary koa, ho an'ireo mpamokatra tsy manana fahazoan-dàlana manana alàlana, dia tsena "voa amidy". Noho izany, ireo tompona orinasa ara-pitsaboana ireo dia tsy maintsy mihazakazaka amin'ny asany manontolo. Noho izany, ny marika tsy mitady tombom-barotra dia tsy manome tombony ireo mpandraharaha amin'ny IRS. Ny fanjakana dia mitaky azy ireo hanonona ny orinasany ho tsy mitady tombombarotra.
Amin'izao fotoana izao dia misy lisansa roa misy.
Ireo manana fahazoan-dàlana dia afaka mivarotra ambongadiny amin'ireo orinasa rongony hafa.
Ireo tompona fahazoan-dàlana ara-pitsaboana dia manana fahazoan-dàlana mifangaro miorim-paka. Afaka manohy miasa izy ireo amin'ny alàlan'io fahazoan-dàlana io ihany. Noho izany, ny maodelin'ny orinasa dia toy ny orinasam-panafody miharo volo.
Amin'ny volana Janoary, hanomboka hamoaka ny fahazoan-dàlana miorina miorim-paka (fahazoan-dàlana lefitra. Ity programa ity dia ho "voa amidy." Hisy ihany koa ny fahazoan-dàlana momba ny orinasa bitika amin'ny taona ho avy. orinasa. Na izany aza, hoferana ho zavamaniry 200 isaky ny orinasa izy io. Ireo zavamaniry 200 dia namboarina ho zavamaniry matotra. Midika izany fa nanomboka naneho famantarana ny firaisana ny voninkazo.
Ireo mpangataka dia tsy maintsy mamoaka ny isan'ny zavamaniry hananan'ny orinasany.
Ny fahazoan-dàlana any New Mexico dia napetraka ho orinasa mitambatra mijoro. Ny raharaham-pitsaboana dia efa tafiditra vertika. Noho izany, ireo lisansa vaovao dia hampidirina vertika.